About – 2hove
musha / About
2fish.co iri boka revarume nevakadzi, kusanganisira vapristi shoma Catholic, vakazvitsaurira kuna pakudzivirira uye achitsanangura kutenda Catholic–kunyanya Roman kutenda Catholic–kuburikidza chikonzero uye chokwadi.
All unobvumirwa kuongorora yedu yepaIndaneti uye verenga mashoko aMwari uye dzedu mhirikiro. Uri uyewo kugamuchirwa kuzviisa pasi mibvunzo yedu “Bvunza Priest” peji kana kuzviisa pasi wapamwoyo mharidzo. Tichafara kuposita mhinduro uye kubvuma kugutsikana nekukurumidza, asi tiri sangano rokuzvipira, uye nhengo imwe neimwe (dai wango) basa rimwe yakazara.
Ndakaedza nepose, shoko redu iri kugamuchira uye Ecumenical, pasina nokusingaperi pokutengesa nechepakati zvinodavirwa muchitendero yeRoma. Kune zvakawanda zvakafanana pane kusiyana pakati siyana mapoka echiKristu, uye apo isu mutambo zvakafanana avo, tichabata kutsanangura nei tichitenda zvatinoita uye tsika sezvatinoita.
Tinotarisira kuzviita zvose pachena, nyore Chirungu.
We akasarudza zita “2hove” nemhaka kaviri zvinoreva.
Chekutanga, kufanana Miracle of (piri) Fish uye (shanu) Zvingwa kuti rinowanikwa neimwe yeEvhangeri ina, tinoda kukanganisa vanhu vakawanda zvatinogona pamwe shoma pfuma. saka, kufanana Springsteen anoimba, “Tiri countin’ pamusoro chishamiso.”
Chepiri, kuburikidza yedu kurongwa (kusvika paunogona), zvakanaka, sanganisira (uye, ovimba, zvinotyisa) mashoko, tinotarisira kubata hove shoma, wo. Taura nesu uwane ruzivo.